Famerenana amin'ny fizarana ny kirihitra | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Famerenana amin'ny fizarana ny kirihitra
Ny fomba hambolena sy ny fivoarana tricyrtis ao amin'ny zaridaina
Ny fahalemen'ny tricyrtis manerantany ho toy ny solontenan'ny tontolon'ny orkide an-jaridaina dia miteraka ahiahy momba ny fanoherany ny fiantraikany ivelany sy ny aretina. Ary raha ny tricyrtis dia tsy mitaintaina loatra momba ny fahasarotana mifandraika amin'ny fikarakarana sy ny fitomboan'ny tahotra, ny fitsaboana tsara ny orkide zaridaina dia tsy azo antoka.
Ahoana ny fomba ahitanao hazo oakwood ao amin'ny zaridaina
Salvia Dubravny, na Salvia, dia hazo malazo izay mety ho zavamaniry isan-taona na maharitra. Ny faritra ambanivohitra dia matetika ahitana karazana hazo madinika. Ny karazam-boninkazo isan-karazany dia ampiasaina amin'ny tontolon'ny planeta, mamorona hira mahagaga. Mahafinaritra koa ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny sakafo.
Karazana fambolena ikinacea: fambolena sy fikarakarana maharitra
Ankehitriny dia nitombo ho an'ny tanjon'ny orinasa i Echinacea, ary toy ny toeram-pitsaboana any Eoropa, Amerika Avaratra, ny Caucasus sy Rosia. Amin'ny fanafody nentim-paharazana sy nentim-paharazana, ary mampiasa ny ravin'ny zavamaniry, sy ny voninkazo, ary ny fakany. Ny fitomboan'ny Echinacea amin'ny alalan'ny zana-ketsa Tsy misy fahasarotana manokana amin'ny fitomboan'i Echinacea.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Famerenana amin'ny fizarana ny kirihitra